Sneijderi iyo Van der Vaart oo looga yeeray kooxda qaranka Netherlands
Home Sports Sneijderi iyo Van der Vaart oo looga yeeray kooxda qaranka Netherlands
Wesley Sneijder iyo Rafael van der Vaart ayaa dib looga yeeray kooxda qaranka Netherlands bishan si ay uga mid noqdaan ciyaartoyda kooxda Holland u ciyaareysa is-reebka hore ee koobka aadduunka oo dhacaya 2014-ka.
Tababaraha kooxda Netherlands, Louis van Gaal ayaa sidoo kale ku baraaruga ciyaar yahanada da’da yer ee kooxda Feyenoord Jean-Paul Boetius iyo Tonny Vilhena in uu ku soo day 26—ka nin ee xulka u safanaya ciyaaraha ay la yeelanayaan waddamada Estonia iyo Romania,
Laakin gool haye Maarten Stekelenburg ayaa sidoo kale goolhayaasha keedka la galiyay.
Boetius iyo Vilhena, oo labadood ah 18-jirro,waa xidiggaha ugu fiican kooxda Feyenoord waxa ay horrey uga mid noqdeen ciyaartoyda 21-jirada ee xulka qaranka Holland.
Dhinaca kale, Sneijder, Stekelenburg iyo Van der Vaart ayaa markale dib loogu soo celiyay xulka qaranka, iyagoona ka maqnaa kulankii saaxibtinimo ee Holland la yeetay kooxda Talyaaniga bishii la soo dhaafay.
Sneijder ayaa xulka laga saaray markii laga waayay kooxda Inter Milan, laakin qaab ciyaareed aad u fiican ayuu la soo baxay markii uu ku soo biiray kooxda Turkiga Galatasaray, halka Stekelenburg dhowr toddobaad uu kooxda Roma ay ku jahwareertay mustaqbalkiisa.
Kooxda Netherlands ayaa ciyaarta ugu horreysa ee is-reebka tartanka kubadda cagta adduunka waxa ay la yeelaneysa kooxda Estonia 22-ka bishan March, halka ciyaarta kale isku dhagan yihiin kooxda Romania afar maalmood kaddib.
Labadaas ciyaar waxa ay ka dhici doonaan garoonka garoonka kooxda Ajax’s AmsterdamArena.
Xulka Netherlands waxaa u safandoona:
Dhinaca gool hayaasha waxaa ugu horreeya: Kenneth Vermeer (Ajax), Michel Vorm (Swansea), Maarten Stekelenburg (Roma)
Difaaca waxaa loo xilsaaray: Daley Blind (Ajax), Mike van der Hoorn (Utrecht), Daryl Janmaat (Feyenoord), Jetro Willems (PSV), Joris Mathijsen (Feyenoord), Ricardo van Rhijn (Ajax), Stefan de Vrij (Feyenoord)
Qadka dhexe: Jordy Clasie (Feyenoord), Wesley Sneijder (Galatasaray), Jonathan de Guzman (Swansea), Adam Maher (AZ), Kevin Strootman (PSV), Rafael van der Vaart (Hamburg), Siem de Jong (Ajax), Tonny Vilhena (Feyenoord)
Xagga weerarka waxa loo daayay: Jean-Paul Boetius (Feyenoord), Klaas-Jan Huntelaar (Schalke), Dirk Kuyt (Fenerbahce), Ola John (Benfica), Robin van Persie (Manchester United), Bas Dost (Wolfsburg), Arjen Robben (Bayern Munich), Ruben Schaken (Feyenoord)
Sneijderi iyoVan der Vaart oo looga yeeray kooxda qaranka Netherlands